Taxanaha 2aad ee kobcinta waxbarashada Gabdhaha: Waxbar gabadhaada oo ciribtir faqriga (dhegayso) – Radio Daljir
Taxanaha 2aad ee kobcinta waxbarashada Gabdhaha: Waxbar gabadhaada oo ciribtir faqriga (dhegayso)
Seteembar 30, 2018 5:10 g 0
Taxanaha 2aad ee barnaamijku waxa uu qayb ka yahay mashruuca waxbar gabdhaha oo ciribtir faqriga, waxaana iska kaashada Wasaaradda Waxbarashada Puntland iyo hay’adda Relief International, waxaana maalgalisey dowladda Ingiriiska.
Asbuucaan waxaa barnaamijka nagala qaybqaadanaya gabdhaha macallimiinta kaamamka barakacayaasha ee Garoowe, heerarkooda waxbarasho iyo doorkooda kobcinta waxbarashada gabdhaha.
Fadlan ka qaybqaado barnaamijka oo nala qaybso fikrikaaga iyo falceliskaagaba. Maanka ku hay tirada haweenku waa 50%+ tirada guud ee bulshada, haddii bulshada nuskeed hormarin laga horistaagana dalku hormar gaari mayo, hormarna lama hiigsan karo.
Hiigsi & Hayaan: Maxaa dhib laga soo maray yagleelka Jaamacadda Bariga Afrika (EAU)? (daawo taxanaha 1aad)
Qalbidhagax: “Diyaar baan u ahay dhexdhexaadin Puntland iyo Al-Shabaab.” (dhegayso)